Home » Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa » Maninona i Sierra Leone no mety ho tsiambaratelo nafenina tsara indrindra amin'ny fampiasam-bola fizahan-tany mandritra ny COVID-19?
Maninona i Sierra Leone no mety ho tsiambaratelo nafenina tsara indrindra amin'ny fampiasam-bola fizahan-tany mandritra ny COVID-19?
Mety tsy mbola nisy fotoana tsara kokoa hampiasana vola Ny fotodrafitrasa fitsangatsanganana sy fizahan-tany any Sierra Leone.
Sierra Leone dia miorina ao Afrika Andrefana miaraka amoron-dranomasina tropikaly, natiora mahavariana ary kolontsaina. Nisongadina izany fa toerana fitsangatsanganana sy fizahan-tany vaovao mandrapahatongan'ny valanaretina. Ny minisitry ny fizahan-tany any Sierra Leone, Memunatu B. Pratt, dia hita fa be vava sy mavitrika amin'ny seho ara-barotra sy kaonferansa fitetezam-paritra eran'izao tontolo izao. Nihetsika avy hatrany izy taorian'ny fipoahan'ny coronavirus.
Nandalo fotoan-tsarotra ny firenena ary mbola manodinkodina amin'ity krizy ity ihany, na izany aza, misy jiro any amin'ny faran'ny tionelina.
Ity hazavana ity dia misy ny fanarenana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, fiaraha-miasa isam-paritra sy manerantany, ary ny tontolo iainana dia natao hahatonga an'i Sierra Leone ho toerana mafana indrindra hampiasana vola amin'ny fizahantany.
Hiditra ao ny masoivoho Precious Gbeteh Sallu Kallon eTurboNews mpitory Juergen Steinmetz avy any Freetown hizara ny sasany ao anatiny izay tsy dia noresahina teo aloha. Ny hafatry ny ambasadaoro dia: Eny, naratra izahay, saingy tsy mbola nanana fanantenana tamin'izay mety hitranga any amin'ny firenentsika velively. Bebe kokoa momba ny HE Precious Gbeteh Sallu Kallon: www.linkedin.com/in/junisak. Andriamatoa Kallon dia mpikambana mavitrika ao amin'ny Birao fizahantany afrikanina.
Mpisolovava sy solontena amin'ny Safertourism Nathanil Tarlow nitsidika an'i Sierra Leone talohan'ny krizy. Safertourism is fiarovana sy fiarovana fiarovana sandry TravelNewsGroup (mpanonta eTurboNews. Safertourism dia eo ambany fitarihan'ny Dr. Peter Tarlow, izay notendren'ny Birao fizahantany afrikanina hiresaka momba ny fiarovana sy fiarovana ny fizahantany.